Maitiro ekudzima mabhuku kubva kuBooks pane yako iPhone ne iPad | Ndinobva mac
Maitiro Ekudzima Mabhuku kubva kuBooks pane Yako iPhone uye iPad
Sezvo vazhinji venyu vatinoziva nekuti munoishandisa kazhinji, iko kunyorera eBooks inobatsira kwazvo kuchengeta mabhuku uye pdf mafaera munzvimbo imwechete mune yako iPhone kana iPad. Kubva kuBooks application, tinogona kushanyira iBooks Chitoro uye nekuwana nekutenga akawanda akasiyana mazita, ese aripo uye makuru echinyakare. Asi rimwe rematambudziko anotarisana nevashandisi vazhinji inzvimbo yekuchengetera zvishandiso zvavo, izvo zvinogona kuzadza nekukurumidza uye nekudaro, zvinokwanisika kuti panguva iyoyo mhinduro yakanakisa bvisa mabhuku izvo zvatakatoverenga. Kuti tiite izvi isu tinongofanira kutevera anotevera matanho.
Chekutanga pane zvese, zvine musoro uye zviri pachena, vhura iyo application eBooks pane yedu iPhone kana iPad. Tichasarudza iyo "Mabhuku angu" tab, muchikamu chezasi chekuruboshwe, uye tobva tadhinda "Sarudza", muchikamu chepamusoro kurudyi.
Nhanho inotevera ichave yekusarudza ese iwo mabhuku uye / kana pdf's iyo yatinoda kudzima kubva kune yedu kifaa. Kuti uite izvi, chingovabata mumwe nemumwe. Paunenge waita izvi, tinya "Delete" muchokumusoro kuruboshwe chikamu chechidzitiro, uye simbisa mumenyu ichaonekwa.
Uye ndizvozvo. Nenzira iri nyore uye inokurumidza kusvikira iwe wabvisa mabhuku awanga uchida kubva eBooks uye iwe wakagadzirira nzvimbo itsva. Zvakare, kana ukadzima bhuku rawakatenga muBooks Store uye wozoda kuwedzera zvakare, ingoshanyira chikamu "Chakatengwa" muchitoro wobva wadzvanya paGore raunowana padhuze payo kuti utorezve.
Rangarira izvo muchikamu chedu Tutorials Une zvaunazvo akasiyana siyana makuru matipi uye manomano kune ako ese Apple zvishandiso, zvishandiso uye masevhisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Zvimwe Zvirongwa zveMac » Maitiro Ekudzima Mabhuku kubva kuBooks pane Yako iPhone uye iPad
Ini ndaisakwanisa kuzviita, iyo yekubvisa ngano haina kuoneka
Mazana emabhuku andakatenga mahara anoonekwa pane rakatengwa runyorwa uye iwo haana kukosha, uye ivo vanoramba vachipinda munzira. Ini ndinodzima mazhinji acho uye vanoramba vachionekwa muraibhurari (kwete sekudzikiswa, asi se "kudzikiswa")
Mune mamwe mazwi, izvo zvaunoda, kwete chete kudzima ivo kubva pachigadzirwa, asiwo kubva pane zvese zvinyorwa
Zvinoita kuti ndide kuona mabhuku akawanda zvekuti handichadi kuverenga uye ayo anogara akanyorwa ipapo
Kuhwina 100 € iTunes kadhi neApplelizados
Kutengwa kweEmotient, maSDD ane USB-C chiteshi, mutambo unotyisa uye zvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac